Nhau - 10 nzira dzekuvhura iyo Dutch yechando
1 Musika weKisimusi
Pamberi pemigwagwa inopenya uye mota dzinotyaira dziri kutengeswa, iwe uchaona maDutch vanopemberera sei Kisimusi uye vanogamuchira kuuya kwechando. Maguta makuru nediki anozove nemisika yeKisimusi, nemazana ezvitoro anotengesa zvekudya zveKisimusi-zvine zvikafu, zvipo, mwenje. , nemvere dzemakwai, zvakavezwa pamatanda, makenduru nezvimwe.Nemumhanzi weKisimusi unofara, unogona kudya nekutamba uchinakidzwa nemigwagwa yakanaka uye madiki diki.
2.Chiedza chinovhenekera husiku hunotonhora
Mutambo weDutch weMwenje zvakare unotanga munguva yechando, uchiunza mwenje mukati mehusiku hurefu. Amsterdam, Eindhoven, kunyangwe cheki dhorobha reGouda vane mhemberero dzakareruka, uye iwe unogona kutora chikepe kukwira neshamwari dzinoverengeka kunoona Holland husiku.
Chiedza cheAmsterdam Chiedza chinoitwa kubva Zvita kusvika Ndira gore rega (2016 Light Festival ichaitwa kubva Zvita 1 kusvika Ndira 22). Chiedza maartist kubva kumatunhu ese epasi achauya kuAmsterdam kuzoratidza mabasa avo. Mwenje inoyambuka mugero nemigwagwa yakatenderedza kujekesa husiku hwechando hwemukoto. Nzira yakanakisa yekuona canal iri nechikepe chehusiku, asi iwe unofanirwa kutenga matikiti pamberi.
Eindhoven Glow festival inoitwa gore rega rega munaNovember, apo guta rinotora chitarisiko chitsva. Machechi, anovaka matenga uye dzimwe nzvimbo dzakawanda dzakashongedzwa nemwenje yakanyatsogadzirirwa nevanyori kuti vabate ziso remunhu wese. Hurefu hwenzira hwacho hunenge 3 ~ 4 makiromita, unogona kunakidzwa neakasiyana ehusiku kuona Eindhoven uchifamba. Kenduru husiku muGouda. Inoitika gore rega muna Zvita. Sezvo husiku kunovira, guta rinodzima materevhizheni ese nemwenje, ichivhenekera zviuru zvemakenduru ehusiku hwemwenje. Panguva iyi, mwenje unodziya wemakenduru unoshandiswawo kugamuchira muNew Year.
3. Haigoni kuvanda kubva muchando, semafungu emhepo
Unogona here kufungidzira kuti pazuva rekutanga reGore Idzva, vanhu zviuru gumi vaizoungana pamwe chete ndokunyudza mumvura inotonhorera panguva imwe chete? Hongu, muHolland, kupenga. Kuchengeta Carnival pakutanga kweGore Idzva, kuchaitwa mumaguta anodarika makumi masere munyika. Kunyangwe hazvo chando cheDutch chinotonhora zvakadii, musasa wekudonha wepagore unoramba uchiwedzera.
4.Marudzi ese echando zviitiko munguva yechando
Ehezve, shanyira nzvimbo yeZwolle iri muNetherlands kuti uone zvifananidzo zveaizi, panounganidzwa maartist anobva kunyika dzakasiyana siyana.Ona maitiro avanochinja kuita mashiripiti, chivezwa chechando muchiedza chekushandira pamwe, kuri pachena uye kwakanaka .Ice Bar, chirongwa ichi chinofanirwa kuiswa panhaurwa kana uchiuya kuNetherlands! Kwete kuSweden chete, asiwo kuNetherlands.Pasi pemadhora gumi, zvese zvinotonhora.Zvechokwadi, iwe unopfeka mbatya dzinodziya uye magirovhosi kuti muviri wako udziirwe, uye kwehafu awa iwe unonakidzwa nezvose zvinotonhora uye chinwiwa chinwiwa.
Nguva yechando muNetherlands, unofanirwa kutaura nezvekukwikwidza.Hapana gomo munzvimbo yepasi yausingakwanise kutsika, asi kuita mutserendende mutambo wakachengeterwa vanhu vazhinji.Nemhuri neshamwari, vanodzungaira panze pamusoro pechando, vakakomberedzwa nekonzati. dzimba nemamiziyamu, uye iwe uchaona vanhu vazhinji vachitamba uye vachirovera pamusoro pechando pamateyiti, uye kudziya nekapu yecocoa inopisa. Nguva yechando inoita kunge inonakidza kune vana vasingatye chando. Kufamba uye kusvetuka musango reEfteling rengano yechando; Tora nzendo dzinoenda kune dzimwe nyika dziri kure kumamiyuziyamu enjanji, ona maumbirwo emagetsi enjini, nekutamba zvivezwa zvechando nemaoko ako. Zvevana, ndangariro dzinofadza.
Ndekupi kwandingawane iyo yakanyanya sora yemapai muNetherlands? Pane iyo Snerttram tambo mota, hongu! Kune mwenje inodziya pane iyo tambo mota, zvirimwa zvakasvibirira uye makodhoni maartist anotamba zvine mweya, uye gwara rinopa kumwe makuhwa kujekesa manzwiro. Pakati penzira, izvo zvinozivikanwa zveRotterdam zvakanaka zvichapfuudzwa.Saka rwendo rwechitima zvakare inzira yakanaka yekushanyira Holland munguva yechando.
6.Food inodziya muviri uye inodziya moyo
NeKisimusi uye Negore Idzva zviri kuuya, chikafu zvakare chimwe chezvinhu zvepamusoro zvechando muHolland. Nguva yechando muNetherlands haigone kushaika sopho yemapea, uye unofanira kunge uchishamisika, uyu muto wakasvibirira muto hautarike zvakanaka. chinodikanwa cheDutch chando chekudya kwemanheru, ine pizi, mbatatisi, karoti, celery, pamwe chete nenguruve uye bhekoni soseji, muto wacho wakafuma kwazvo, kana ukairavira, uchawana mbichana yayo inonaka, yechando, izere nesimba.
Stroopwafel, chimwe chezvikafu zvinonyanya kufarirwa.Neiri caramel sirafu iri pakati, yekunze yakapfava uye mukati yakanyorova uye inotsenga, inotapira chaizvo asi isina mafuta. VaDutch vanonyatsoda zviwitsi, uye vanofarira kugadzira pamwe nekudya. Iyo chaiyo nzira yekudya iyi cookie iri pamusoro pekofi inofashaira yekofi kana tii uye inodyiwa ichipisa.
7.Winter famba pamhenderekedzo
Nguva yechando zvese zvakasvava, zviuru zvemakiromita echando, kutsika chando uye kutarisa gungwa zvakare irwo rudzi rwekunaka. Netherlands ine 250 makiromita emahombekombe egungwa, saka unogona kudziya pane cafe iri padyo.
Musi waEva Idzva Idzva musi waZvita 31, guta rega rega richaisa mafirati ekuratidzira. Pakati pavo Erasmus Bridge muRotterdam ndiyo inokatyamadza, vanhu vanobvumidzwa kutenga mafiraya madiki kuti vafare pazuva iri.
Mapati emigwagwa anokwira kumigwagwa uye kupembera nemunhu wese
Kuchave nemhemberero dzakasiyana dzakasiyana mumigwagwa nemumakwere Semuenzaniso, zviitiko zveKisimusi zveSinterklaas, Deventer's Dickens Mutambo, kana mwaka wekutengesa weKisimusi.
10 Teerera kukonzati
Famba-famba kuburikidza nekonzati yechinyakare, famba nepakati peNational Museum.Mitambo uye mamiziyamu zvakare zvinogamuchira zviitiko pane akasiyana madingindira kuona kuti mwaka wako wechando muNetherlands hauzosurukirwe.